Isheen Eenyu? 13: ‘Qabsoo Oromoo dura ansullee mirga dubartootaafis nan falma’ - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIsheen Eenyu? 13: ‘Qabsoo Oromoo dura ansullee mirga dubartootaafis nan falma’
Godina Arsii magaalaa Adaabbaa keessattin dhaladhee guddadhe. Barnoota sadarkaa jalqabaa fi sadarkaa lammaffaas achumattin baradhe.
Isa booda jalqaba bara 2000 irrattin maatii kiyya (Abbaa fi haadha) waliin gara biyya alaa deeme. Barnootakoo sadarkaa lammaffaa kan hafes achumattin itti fufe.
Barnoota sadarkaa lammaffaa xumureen kolleejjii biyya Ameerikaatti Saayinsii Siyaasaan digirii jalqabaa baradhe.
Ergan digirii jalqabaa xumuree waggaa tokko boodammoo digirii lammaffaa Fayyaa Hawaasaa (Public Health) baradhe.
Digirii lammaffaa kan biraa ammas Bulchiinsa Mootummaa (Public Admistration) baradhe. Bara 2013 Yuuniversitii oof Illinooy kan Chikaagoo fi Kan Ispiriingifiildi jiran keessaa eebbifamee ba’e.
Seenaa akka quuqamtuu mirga namaa…
Abbaan kiyya miseensa Adda Bilisummaa Oromoo waan tureef maatii kiyyarratti dhiittaa mirga namoomaatu qaqqabaa ture.
Oromoon akka keenyaa hedduun hacuucamaa turan, naannoo an keessatti guddadhettimmoo mirgi dubartootaas sarbamaa ture.
Waanti nama gaddisiisu Abbaanis intala tuma, Obboleessis obboleettii tuma, Abbaan manaas haadha manaa tuma, hunduu dubartiidha. Kanaafuu akkamiin kana keessaa baana kan jedhu na quuqa ture.
Kana waan ta’eef waa’ee mirga namoomaa quuqamuu manuma barumsaattin eegale. Mana barnootaa keessa wayitan ture dhimma mirga dhala namaa, kan gurraachotaa fi dubartootaa keessatti akkaan hirmaachaan ture.
Yuuniversitii oof Illinooy keessatti dura teessuu barattoota Afriikaarraa dhufaniin ture. Wayituman kolleejjii turemmoo Gamtaa Barattoota Oromoo uumnee hojjechaa turre.
Bara 2004-2005tti nuti ijoolleen Oromoo nama lamaa fi lammii Sudaan tokko ofitti daballee alaabaa keenya Yuuniversitii keessatti mul’isne. Alaabaa Oromoo Alaabaa Afriikaa cinaa keenyee achirraa Oromoo beeksisuu eegalle.
Barnootan baradhee fi quuqaman durumaan qabu walitti ida’amee daranuu saboota cunqurfamoof hojjechuurratti akkan hojjedhu na gargaare. Yuuniyenii barattoota gurraachaa keessattillee hirmaannaa olaanaa gochaan ture.
Wayitan digirii lammaffaa baradhummoo Pirezidaantii barattootaa keessatti seenatara olaantuun ture.
FUULA FEESBUUKII SEENAA JIMJIMOO
Oromoo addunyaatti beeksisuu
An dura irratti kan irratti xiyyeeffadhe dhimma Oromoorratti hojjechuudha. Sababni isaammoo addunyaan waan Oromoo jedhamu kana homaatuu hin beeku.
Oromoo sabi bal’aan kun addunyaadhaan wal’aalaee wayita jirutti ani hojiin kana beeksisuuttin ka’e.
Sababa kanaan waggaa digdama Oromoof quuqamaa hojjechaa ture keessatti Addunyaan Oromoodhaan na beekti. Kaayyoon kiyyas kana ture.
Bara 2006 Waldaa Dargaggoota Addunyaa kan mirga baqattootaaf falmu hundeessine. Obbo Jawaar Mohammad, Mohaammad Adamoo fi Arfaasee waliin taanee cimsine.
Yeroma sanammoo Waldaa Hawaasa Oromoo magaalaa Chikaagoo keessatti dubartootaa fi dargaggoota bakka bu’ee sadarkaa adda addaarratti hojjedheera.
Wiixine seeraa ‘HR 128
Akkan wiixinee kana eegalu kan na dirqamsiise uummanni keenya nama dhibee isaa beekuuf dhabuusaati.
Bara 2006 keessa dhaabbata “Enough project” kan jedhamu dhaabbata kan warra Sudaan Kibbaaf falmaa ture keessatti hirmaadhe. Dhaabbata guddaa mirga dhala namaaf falmuudha.
Namoonni bebbeekamoon akka Baaraak Obaamaa akkasumas Ameerkaa bakka buutee UN keessa kan turte Samaantaa Paaworfaatu keessa turan.
Isaan waliin turuunkoo akkamitti dhiibbaa uumanii mirga dhala namaa kabachiisuun akka danda’amu na barsiiseera. Qabsoon keenya kan Oromoollee akkas ta’uu ni danda’a kan jedhuun yaadi wiixinee kana bu’uuressuu naaf dhufe.
Utuun kanaan jiruu warraaqsi bara 2014 keessa degale. Bara sana namni an baayyee itti dhiyaadhuu fi roorroo baqatee akka biyyaa ba’u itti himaa ture Obbo Baqqalaa Garbaa hidhaman.
Kanaan anis xiiqii keessa galeen dhimmi keenya bakka guddaa ga’uu akka qabun murteessee, Kongireesii Ameerikaa jechuu dha.
Dhimma kana namoota gameeyyii Oromoon qabdu kan akka Jawaar Mohaammad fi Mohammaad Adamoo akkasumas namoota birootti dhiyeessus jarri garuu waan dhugoomu waan itti hin fakkaanneef hin fudhanne. An garuu ittuman cliche.
Bara 2016 carraan wiixinee seeraa kun ittiin naaf milkaa’uu danda’u uumamee ture. Hawaasi Oromoo Ameerikaatti hiriira guddaa ba’e.
Isa booda anis marii isaanii gabbiseen akkaataa yaadi isaanii itti pirezidaantii Ameerikaa bira ga’urratti hojjechuun eegale.
Yaadaa fi gaaffii uummataa kanaa gara kongireesii geessuun eegale. Haata’u malee wiixineen keenya inni bara 2016 lakkoofsa 861 jedhamu ni kufe. Sababiinsaas kongireesiin filannoo waan geggeesseef.
Yerooma sanallee deeggersa nama 40 akkasii qabna turre. Ergasii kongireesii haaraan filamee, garuu bara 2017 keessa gama guddaan deeggersa argannee Wiixinee seeraa HR 128 ta’ee nuuf ragga’eera.
‘Dhimma kanarratti kitaabas barreesseera’
Kitaabi kiyya qabsoo fi bu’aa bayii qabsoo Oromoo bara 2016 hanga bara 2019 irratti xiyyeeffadheen barreesse.
Keessattuu dayaasporaan biyya alaa jiru ilaalcha Ameerikaan Itoophiyaaf qabdu akkamiin jijjiira kan jedhuu fi tokkummaa Oromoo cimsuuf fala kan ta’e wal-amntaan akkamiin dhufuu akka danda’a kan jedhurratti qabxiiwwa hedduu kan kaa’eedha.
Dhumarratti rakkoo Oromoo irratt falli maali kan jedhu bal’isee ibseera.
Dubartootaaf maal buuste?
Qabsoon Oromoo haa dursu malee dhimma dubartootaarrattis hojjedheera. Bara 2014 waldaa dubartootaa “Damboobduu Foundation” hundeesseen ture.
Hiriyoota kiyya warra adii waliin taanee hundeessine. Shamarran kubbaa millaa akka taphataniif yuunifoormii biteeraaf.
Mana barumsa bakkan itti dhaladhee jiru ‘Bulchaa Raayyaa’ keessatti bara 2014 irraa eegalee hamma har’aatti shamarraniif yuunifoormii fi kitaaba biteen dhiyeessa.
Faawundeeshinii kana jalatti shamarran akka maallaqa qabattee hojii baraatti deemtuuf hamma har’aa deggeraan jira.
Biyya alaattillee shamarran keessattuu kanneen baqattoota ta’an akkamiin jiruu, qajeelachaa fi karoora akka qabaataniif nan gorsa.
Dhimma dubartootaarrattis waltajjiin argadhe hundarratti nan falmadha. Kitaaba kiyya keessattillee boqonnaan tokko dhimma dubartootaarratti kan xiyyeeffateedha.
Amma maalirra jirti?
Yeroo ammaa Itoophiyaan jira. Biyya kanan galeen waa kanaaf,
Tokkoffaa haala sarbamiinsa mirga namoomaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti keessaahuu kan Oromoorratti raawwatamaa jiru ragaa qabatamaadhaan deggeree addunyaattin mul’isuu barbaada.
Haalli Itoophiyaa keessa jiru haalaan na yaaddessa. Akka nama mirga dhala namaaf quuqamu tokkootti biyya alaa taa’ee dararaa uummata kanarra ga’aa jiru gurraa fi ija addunyaan ga’uun na rakkisa.
Jaarmiyaa Addunyaas ta’e namni dhuunfaa wayita namni ajjeefamaa, hidhamaa jira jettuun ragaa qabatamaa si gaafatu. Kanaafuu anis keessa jiraadhee waan qabatamaa addunyaatti gabaasuufan dhufe.
Lammaffaan ammoo partilee siyaasaa Oromoo waliin haala jiru dubbachuun barbaada.
Filannoo bara 2020 irratti ni hirmaattaa?
Paartilee siyaasaa Oromoo kan Obbo Daawud Ibsaa, Piroofeesar Mararaa Guddinaa fi Birgaader Janaraal Kamaal Galchuun durfamu waliin marii eegalleera.
Qabsoo Oromoo keessatti waggaa 17 ol dabarseera. Oromoon yeroo ammaa yeroo murteessaarra ga’eera. Gartokkotti ba’uun dirqama dha.
Anis ammoo akka nama qabsoo kana keessa tureetti murtibi na barbaachisa. Yeroon filannoodhaaf ji’a ja’a caalaa hin hafne.
Kanaafuu paartilee Oromoo waliin mari’annee yoo haalli na dirqamsiise gara paartii siyaasaa deemuun kiyya waan haftu miti.
Ani akka nama tokkootti Oromoof waa buusuutu narra jiraata, wantin gochuu qabu jira jedhee yoon itti amane murteessuun kiyya hin oolu.
Ammaaf Haalan qorachaa jira. Murteesauun kiyya garuu waan oolu miti.
Wallagga: Duguuggaa sanyii (genocide) mootummaan lixa oromiyaatti raawwachaa jiru ija siyaasaa qofaan ilaaluun dogoggora